[ Jun 09, 2021 ] पर्यटन क्षेत्रका मजदुर भन्छन्– अब खेतीपाती गरौं
सनकुमार जुग्जाली र्‍याफ्टिङ गाइड हुन्। पर्यटनमा उनको संलग्नता झन्डै दुई दशकदेखि छ। लामो समयको र्‍याफ्टिङ अनुभव भए पनि पछिल्लो समय उनी पदयात्रा क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिए। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका घर भएका उनी परिवारसहित पोखरामा डेरा बस्दै आएका छन्। उनकी श्रीमती पनि पदयात्रा गाइड हुन्। कोरोना कहर सुरु हुनुअघि…
[ Jun 03, 2021 ] चितवनका किसानलाई यो वर्ष पनि मलकै चिन्ता
चितवन । चितवनमा धानको बीउ राख्ने समय सुरु भएसँगै किसानहरु मल नपाइने चिन्तामा छन् । यसपटक पनि मलको अभाव हुने भन्दै किसान चिन्तित भएका हुन् । गत वर्ष कोरोना महामारीकोसमेत बेवास्ता गर्दै किसानहरू मल लिन निकै लामो…
[ Jun 02, 2021 ] दुई वर्षभित्र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्छौ : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अबको दुई वर्षभित्र मुलुक दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बताइन् । विश्व दूध दिवशको अवसरमा दूग्ध राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । उनले हाम्रो प्राणको सुरुवात दूधबाट भएको भन्दै…
[ Jun 01, 2021 ] नेवानिसहित चार वायुसेवालाई तीन गन्तव्यमा नियमित उडानको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्ससहित चार वायुसेवा कम्पनीले तीन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडानको अनुमति पाएका छन् । सरकारले भारतमा दुई र अन्य तीन मुलुकमा साताको एक नियमित उडान खोलेको छ । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान तालिका…
[ May 29, 2021 ] बढ्यो कृषिको बजेट, ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको…
[ May 29, 2021 ] सगरमाथा आरोहण शताब्दी वर्ष - तेन्जिङको त्यो पहिलो पाइलो
आज मे २९, २०२१। वर्षका हिसाबले सगरमाथा आरोहणको प्रयास आरम्भ भएको एक शताब्दी पूरा भएको छ। विख्यात एल्पिनिष्ट जर्ज हर्बर्ट लि. मेलोरी सम्मिलित टोलीले दार्जीलिङबाट ‘ब्रिटिस माउन्ट एभरेष्ट रिकोनोसेन्स एक्स्पेडिसन’मार्फत मे १८, १९२१ देखि सर्वप्रथम तिब्तत तर्फबाट सगरमाथा आरोहण अभियान आरम्भ गरेको थियो। मेलोरी पहिलोपटक सेप्टेम्बर २३ मा…
[ May 27, 2021 ] ८ हजार मिटरमाथि पुगेका आरोही पनि फर्किन थालेः खिमलाल गौतम
खिमलाल गौतमले दुई पटक सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्। उनको नेतृत्वमा सगरमाथाको मापन गरिएको थियो। अहिले सगारमाथा आधार शिवरमा सम्पर्क अधिकृतको रुपमा रहेका गौतमसँग गरिएको कुराकानी : अहिले सगरमाथा क्षेत्रको मौसम कस्तो छ? यहाँ हिजोदेखि भारिमात्रामा…
[ May 25, 2021 ] कृषि बजेट : किसानमुखी कम, कार्यकर्तामुखी ज्यादा
काठमाडौं । बजेट बन्ने सयममा सधैंजसो बहसमा नछुट्ने विषय हो कृषि क्षेत्र, तर चर्चा गरेजस्तो काम कहिल्यै हुँदैन । यो पटक चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटमा के अपेक्षा गर्ने त ? कृषि विज्ञहरु जननिर्वाचित सरकारले समेत हेलाहोचो गरेको कृषि…
[ May 21, 2021 ] कालीमाटीमा जोखिम घटेन
काठमाडौँ । देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीको खुद्रा र किसान बजार बन्द गरे पनि भीडभाड नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बजारमा स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ । खुद्रा र किसान बजारमा तरकारी कारोबार गर्ने व्यापारीले बजारबाहिर सडकपेटीमै बसेर खुला रूपमा व्यापार गर्न थालेपछि झनै जोखिम बढेको हो…
[ May 18, 2021 ] अनुकुल मौसम पर्खिँदै १२ सय जना सगरमाथा बेस क्याम्पमा
काठमाडौं । अरब सागरबाट उत्पन्न भएको चक्रवातको प्रभाव नेपालमा समेत परेको छ । यसले उच्च हिमाली भेगमा हिमपात गराउने र अन्य भूभागमा वर्षा गराउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागले मंगलबार जारी गरेको भिडियो बुलेटिन…
[ May 17, 2021 ] जाङ्गबु शेर्पा: कोरोना जितेको डेढ सातामा सगरमाथा आरोहण
बाजुरा। विश्व कीर्तिमान कायम गरेका जाङ्ग्बु शेर्पाले सत्रौँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । उनले कोरोनाबाट सञ्चो भएको डेढ सातामै बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीसँगै सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । उनले वैशाख २८ गते मंगलबार बिहान ६ बजेर ५ मिनेटमा सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् ।
[ May 07, 2021 ] आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै कामिरिताले चढे २५औँ पटक सगरमाथा
नेपाली आरोही कामिरिता शेर्पाले २५औँ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आफ्नो कीर्तिमान तोडेका छन्। याे वर्ष वसन्त ऋतुको पहिलाे आरोहणका रुपमा उनीसहित १२ जनाले सगरमाथाको चुचुरोमा टेकेका हुन्। सेभेन समिटका अनुसार साँझ ६ बजे उनी सगरमाथाको चुचुरोमा…
[ Apr 08, 2021 ] पोखराका पर्यटन व्यवसायीको गुनासो : नयाँ वर्ष पनि सुख्खा हुने भयो
पोखरा । देशकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरामा नयाँ वर्षका अवसरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आए पनि कोरोना संक्रमणका कारण लगातार दोस्रो वर्ष त्यो परम्परा टुट्ने भएको छ । सरकारले राति ९ बजेपछि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन नगर्न भनेपछि त झनै यसपालिको नयाँ वर्षमा पर्यटन…